Ny endrik'ilay kibo mandritra ny fitondrana vohoka
Ny vehivavy mitafy ny fon'ny zazakely dia miandry amim-paharetana ny fotoana ahafahana mamaritra ny firaisana amin'ny zaza. Fa ny fikarohana fikarohana lalindalina dia manome valiny amin'ity fanontaniana mirehitra ity noho ny antony marobe - fotoana fohy loatra, ny ankizy dia nitodika tany amin'ny lalana diso, sy ny sisa.
Efa hatramin'ny ela ny mari-pamantarana marina momba ny famaritana ny firaisana dia ny endrik'ilay kibo mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny ankizilahy na tovovavy. Raha ny marina dia fantatra fa samy hafa ny mammizy rehetra. Andeha hojerentsika raha mendrika ny hatoky ireo famantarana, ary inona no asehon'io endrika io.
Voalaza fa ny reny manantena zazalahy iray dia manana volo marefo, ary matetika dia marefo. Raha mijery vehivavy toy izany bevohoka avy any aoriana ianao, dia tsy hisy toerana azo tsapain-tanana, satria tsy manosihosy ny tendany sy ny barany izy.
Ny endriky ny kibo rehefa bevohoka ny ankizivavy iray
Ao amin'ny vahoaka dia heverina fa ny ankizivavy dia manalavitra ny reniny ho anisan'ny hatsarana. Izany dia miseho amin'ny tavy marevaka, siramamy matevina eo amin'ny andaniny sy boribory boribory mitovy amin'ny baolina. Ny vavony dia mety manana endrika kely tsy dia misy dikany, mitovy tarehy - izany rehetra izany dia manohana ny ankizivavy ao anatiny. Ankoatra izany, ny reniko dia mihaingo kokoa ny tarehiny ary somary mihamangatsiaka, indrindra amin'ny trimès farany.
Inona no tena mamaritra ny endriky ny kibo mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny dokotera dia mandà ny karazana famantarana rehetra mifandraika amin'ny fifandraisana eo amin'ny firaisana ara-nofo sy ny endriky ny kibon'ny reniny. Ireo renim-pianakaviana lehibe, izay nanana lanjany be loatra talohan'ny bevohoka, dia manana kibo boribory foana, ary mendri-kaja, mifanohitra amin'izany, kely sy manondro. Ankoatr'izany, raha mitombo ao anaty kibo kely ny zazakely dia tsy ho toy izany mihitsy.
Ankoatra ny habetsahan'ny bevohoka, ny endriky ny kibo dia misy fiantraikany eo amin'ny toeran'ny zaza ao anatiny - mety hivezivezy, mivatravatra na manindrona. Ny tranga roa farany dia hanome boribory boribory feno. Ankoatra izany, raha tsy hita tsara ny zaza (atsangana), dia manjary mihodinkodina sy avo kokoa ilay vavony, toy ny hoe "amin'ny ankizivavy." Ny polyhydramnios dia matetika ny kibo lava, ary ny rano ambany, izay mifanohitra amin'izany, dia kely sy maranitra.
Raha misy tovovavy kely manana olana ara-pahasalamana eo amin'ny tendrony ambany, dia matetika izy no manana vovobony mitongilana. Aza hadino ny placenta - ny toerany eo anoloana dia manala ny endriky ny kibony, manome azy ho fihenam-bidy.
Inona no famafazana IVF?
Sazy an-tsokosoko Intracytoplasmic
Marika eo amin'ny gorodon'ny zaza
Karazam-bary vita amin'ny sora-baventy ho an'ny ankizy
Polisy ho an'ny vehivavy
Manao ahoana ny manao fihodirana amin'ny elastic?
Belly belly during pregnancy
Ahoana no ahafahana ampongabendanitra iray amin'ny vato?
Ashley Graham nanamboatra ny fonon'ny Glamor
Nahoana no mandoko ny atin'ny paka?
Cerebral edema - antony
Ahoana no ahafahan'ny trondro mena ao anaty lafaoro?
Fomba ahoana no handoavana ny lanjan'ny menopause amin'ny 50 taona?
Tranoben'ny polisy Nouvelle Zélande